Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Barattoonni Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataan dhuman
Lubbuun barattoota Yunivarsiitii 16 balaa konkolaataa guyyaa har’aa naannoo magaalaa Cirootti dhaqqabeen galaafatameera. Konkolaataan humna isaatii olitti barattoota 40 fe’ee imalaa ture garagaluu isaati kan barattoonni heddu maatii isaaniitiin osoo wol hin argin karatti akka hafan kan godhe. Barattoonni madaayan hospitaala Adaamaafi Cirootti wol’aansa argataa jiru jedhama.
Yeroo baatii tokko hin caalle keessatti nannoon Oromiyaa gara nama 90 balaa konkolaataan dhabde. Itoophiyaan balaa konkolaataan addunyaa hooggannuu erga eegaltee bubbulteerti. Woggaa woggatti namoota kuma heddutu balaa konmolaataan lubbuu dhaba. Qabeenyi barbadaayus salphaa miti. Maddi rakkoo balaa konkolaataa mootummaan seera tiraafiikaa kabajsiisuu dadhabuudha. Biyya seerri tiraafiikaa seeraan keessatti kabajamuu kamuu keessatti woggatti lubbuu nama muraasaati kan galaafatamu.
Barattoota du’anitti biyyeen haa salphatu. Maatii isaaniif waaqni obsaafi jajjabina haa laatu. Kanniin madaayan waaqni dafee haa fayyisu.
Previous articleODF labsiin ADWUI’n faaydaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu irratti baaste fudhatama hin qabu jedha
Next articleOromiyaa keessatti Afaan Oromoon barachuufi hojjachuun dhiphataa dhufeera